Manchester United Oo Dharbaaxo Xoogan Kala Kulantay Newcastle +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Manchester United Oo Dharbaaxo Xoogan Kala Kulantay Newcastle +SAWIRRO
Kooxda Newcastle United ayaa guul muhiim u ahayd ka gaartay naadiga Manchester United oo ay ku soo dhaweysay garoonkeeda St James’ Park kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Intii lagu guda jiray qeybtii hore ee ciyaarta Man United iyo Newcastle ayaa ku guuldarreystay inay goolal iska dhaliyaan.
Newcastle United ayaa ku andacooday 45-daqiiqo ee hore intii lagu guda jiray inaan loo dhigin dhowr qalad oo ay galeen xiddigaha Man United, waxaana ka mid ah ahaa mid ay ku cawdeen inuu ahaa rigoore, oo xiddig ka tirsan ayuu Smalling ku jilaafay xerada ganaaxa.
Dhinaca kale Manchester United oo marti ahayd ayaa iska lumisay fursado ay goolal ku dhalin kareen fursadaha ugu cajiibsanaana waxaa ka lumiyey Martial iyo Lukaku.
Si kastaba ha ahaatee, kulankii ka dhacay garoonka St James’ Park ayaa qeybta hore lagu kala nastay barbaro 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad Newcastle United oo marti loo ahaa ayaa la timid goolka qura oo ay guusha ku qaadatay, waxaana u dhaliyey 65’daqiiqo Matt Ritchie.
Laad xor ah oo la soo qaaday, isla markaana uu madax ku wareejiyey mid ka mid ah xiddigaha Newcastle waxaan si wacan u sii wareejiyey Dwight Gayle, ka hor inta uusan shabaqa ku tolin Matt Ritchie.
Man United ayaa isku dayday inay ugu yaraan goolkaas iska soo gudo laakiin dhowr fursadood ayaa laga beeniyey oo ay u weynayd kubbad uu isagoo xerada ganaaxa ku jira labo goor oo isxigtay laaday Martial, balse ay ka soo saareen difaaca Newcastle.
Kulankii ka dhacay garoonka St James’ Park ayaana Man United looga adkaaday 1-0.
Kadib kulankii Guuldarada ay kala kulantay Manchester United kooxda Newcastle United ayaa waxaa lasoo saaray waxyaabihii laga bartay Cayaartaas ee ahaa wixii ugu xiisah badnaa.